दशैंको आज सातौं दिन, घरघरमा फूलपाती भित्राइँदै | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
दशैंको आज सातौं दिन, घरघरमा फूलपाती भित्राइँदै
प्रकाशित मिति १८ आश्विन २०७६, शनिबार ११:३८ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । आज नवरात्रिको सातौं दिन अर्थात् फूलपाती, दशैंको खास दिन आजैबाट शुभारम्भ हुन्छ । फूलपातीको दिनदेखि सरकारी कार्यालयहरु सार्वजनिक विदा हुने भएकाले दशैंको टीका थाप्न आ-आफ्नो घर फर्किने क्रम आजैबाट बढेको छ ।
नवपत्रिकाको नामले समेत चिनिने फूलपाती नौ देवीको प्रतीकको रुपमा भित्राइ शास्त्रीय विधिअनुसार शक्तिको आराधनाका साथ पूजा गर्ने वैदिक विधि रहेको नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिका अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद् प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
फूलपाती भित्राएपछि नौ वटै देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ । फूलपाती भित्राउनका लागि साइतको आवश्यकता नपर्ने पनि प्रा. डा. गौतम बताउँछन् ।
हनुमानढोकामा ३ बजे फूलपाती भित्राइँदै
आश्विन शुक्ल सप्तमीको दिनदेखि नै शक्तिपीठहरुमा पूजा गर्नेहरुको घुइँचो थप बढ्ने गर्दछ । नवदुर्गाका नौवटा स्वरुप छन् । जसलाई नवरात्रभर हरेक दिन फरक-फरक स्वरुपमा पूजा आराधना गरिन्छ ।
आवासीय चिकित्सकको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप, चिकित्सकको एप्रोनसमेत च्यातियाे
काठमाडौं । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरुले निकालेको र्‍यालीमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ ।
यस्ता तरकारीको प्रयोग नगर्नु गर्मीको समयमा
काठमाडौ । तरकारी भिटामिन, मिनरल्स र शरीरका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्वको प्राकृतिक स्रोत हो । तर, केही तरकारी यस्ता…
काठमाडौं । तीन दशकपछि बंगलादेशी राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण आजबाट हुँदैछ । नेपाल र भारत दूरीका हिसाबले निकट छिमेकी भए…
एक भारतीयसहित दुई जनाको शव फेला
वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा एक भारतीय नागरिकसहित दुई जनाको शव भेटिएको छ । भारतको बिहार छाप्रा जिल्ला सिमान–१ मा बस्ने…
युवतीले गरिन् आफ्नै भाइसँग विहे, यस्तो छ रहस्य
काठमाडाैं । भारतको पञ्जाबकी एक युवतीले आफ्नै सहोदर भाइसँग विवाह गरेकी छन् । घटना बाहिर आएपछि प्रहरीले छानबिन शुरु…